Maalinta ka hortagga dadka naftooda dila 2019: Sidee ayaa loola hadlaa qof ku fekeraya inuu is dilo - BBC News Somali
Maalinta ka hortagga dadka naftooda dila 2019: Sidee ayaa loola hadlaa qof ku fekeraya inuu is dilo
Image caption Qofka inuu naftiisa dilo ayaa lala xiriiryay kelinimada
40-kii ilbiriqsaba, qof dunida ku sugan ayaa naftiisa dila.
Ku dhowaad 800,000 oo qof ayaa sanad walba naftooda dila sida ay sheegtay hay`adda caafimaadka adduunka ee (WHO) waana waxa labaad ee sababa dhimashada dadka ay da`doodu u dhaxayso 15 ilaa 29 sano, marka laga soo tago shilka waddooyinka.
WHO ayaa sheegay in mowduuca dadka naftooda dila aanan si waafi ah looga hadlin, waxayna saameysaa carruurta, waaliddiinta, lammaanaha, saaxiibbada amaba dadka aad isku meel ka shaqeysaan.
Iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta ka hortagga dadka naftooda dila, ayaa waxaan eegeynaa qaababka loola hadlo qof ku fekeraya inuu naftiisa dilo.
Bilow wada hadalka
Image caption WHO ayaa sheegtay inay muhiim tahay in da`yarta laga caawiyo sidii ay uga kabsan lahaayeen culeyska saaran
Ma jiro hab sax ah amaba khalad ah oo looga hadlo dareenka isdilka - inaad hadalka bilowdo ayaa muhiim ah, sida ay Emma Carrington, oo ah afhayeenka Rethink UK, u sheegtay BBC-da.
"Ugu horreyn waa inaan fahannaa inuu yahay wada hadal adag. Ma aha wax aan maalin walba ka hadalno. Sidaas daraaddeed waad nixi doontaa wana wax iska caadi ah ."
Talo ku aaddan sida loola hadlo qof ku fekeraya inuu is dilo:
Dooro meel deggan oo qofka kalena uu nafis ku dareemayo.
Hubi inaad labadiinnuba haysataan waqti idinku filan oo aad ku hadashaan.
Haddii aad wax khaldan tiraahdo, ha walwalin; ha ciqaabin naftaada.
Qofka kale diiradda saar, indhaha toos uga eeg, telefoonka iska fogee. Dareenkaaga dhan sii.
Dulqaad yeelo. Waqti badan ayay qaadan kartaa inuu qofku is furfuro.
Adeegso su`aalo furan oo u baahan jawaab ka badan haa/maya. Hubi inaad fahantay.
Hadalka haka dhexgelin qofka amaba xal haku degdegin; hala soo boodin fekraddaada ku aaddan sida qofka kale uu dareemayo.
Hubi inay ogyihiin halka ay ka heli karaan caawinaad rasmi ah.
Yaa khatar ku jira?
Isdilku wuxuu saameeyaan da`aadka kala duwan ee dadka balse ragga ayaa u badan kuwa naftooda dila.
Sanadkii 2016 ragga naftooda dila ayaa ka badnaa haweenka. Ruushka waa dalka ugu badan ee ay raggu naftooda dilaan, marka loo barbardhigo haweenka.
Xiriirka u dhaxeeya inuu qofku naftiisa dilo iyo xanuunka dhimirka (gaar ahaan, walaaca iyo isticmaalka daroogada) ayaa la caddeeyay.
Balse waxaa sidoo kale qofka ku kallifi kara inuu naftiisa dilo ayaa ah dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dhaqaale, xiriirka lammaanaha, iyo xanuun raagay.
Image caption Xitaa haddii aadan ku raacin waxa qofka kale sheegayo, waa inaad u oggolaataa inay si furna uga hadlaan waxa dhibaya
Maxay bulshadu ka qaban kartaa?
WHO ayaa sheegtay in dowladu ay wax badan sameyn karaan si looga hortago isdilka:
In takoorka la baabi`iyo lagana hadlo arrinta.
In da`yarta laga caawiyo inay xirfado sameystaan si ay culeysyada nolosha isaga dejiyaan.
In shaqaalaha caafimaadka ee aan khibradda lahayn loo tababaro qiimeynta iyo wax ka qabashada dabeecadaha muujinaya inuu qofku doonayo inuu is dilo.
In la ogaado lana garab istaago dadka khatarta ku jira xiriir muddo dheer jirana lala sameeyo.
In la xaddido waxa qofka u sahli kara inuu is dilo.
Waxyaabaha mala awaalka ah
Ururrada ka shaqeeya xanuunnada dhimirka ku dhaca ayaa isku daya inay baabi`iyaan waxa ay ku sheegeen inay tahay mala awaal: in dadka oo lagala hadlo isdilka ay ku dhalin karto in fakrado khaldan ay aaminaan.
Blase sida uu qabo Beyond Blue, oo ah urur arrimaha caafimaadka dhimirka ka shaqeeya oo ka dhisan Australia, in laga hadlo isdilka wuxuu rajo ku beeri karaa dadka ku fekeraya inay is dilaan.
Ha xukmin qofka
Inkastoo caawinaad rasmi ah ay tahay habka keliya ee lagu heli karo daaweyn iyo la talin, Carrington ayaa sheegtay in si furan looga hadlo isdilka ayaa muujineysa inaadan ahayn qof dadka xukmiya, waxayna taasi qofka ka caawineysaa inuu agtaada ku nefiso.
Ka hadal 'maanta'
"Haddii aad qof ka walaacsan tahay, weydii sida ay maanta dareemayaan. In erayga 'maanta aad adeegsato wuu caawinayaa', sababtoo ah haddii ay culeys dareemayaan, way ka hadli karaan."